Ny Fiarovana ny natiora any Kiobà: dingana lehibe iray amin'ny fiarovana ny loharano ao Karaiba | Reef Resilience
Ny Fiarovana ny natiora any Kiobà: dingana lehibe iray amin'ny fiarovana ny loharano ao Karaiba
Enga anie 4, 2015 | Vaovao
Raha ny habetsahan'i Florida, Kiobà no nosy betsaka indrindra any Karaiba izay misy karazan-javamaniry sy zavamaniry mihoatra ny 10,000. Ny haran-dranomasin'ny firenena dia maharitra anatin'ny 1000 km maily ary maneho ny ampahatelon'ny vatohara rehetra any Karaiba. Ny fiarovana ara-pahasalamana an-dranomasina ao Kiobà dia tena ilaina amin'ny famaritana ny haran-dranomasina eo amin'ny faritra sy ny famokarana angovo izay tsy tombontsoa fotsiny amin'ny faritra Karaiba, fa koa any atsimo atsinanan'i Etazonia.
Ny Fiarovana ny natiora dia miara-miasa amin'ny masoivoho mpiaro ny tontolo iainana nandritra ny taona 20, izay manome fampiofanana toy ny fitantanana sy fiarovana ny planeta, GPS sy GIS, fanaraha-maso ny vatohara ho an'ny vatohara, ny fampifanarahana ny toetrandro ary ny fizahan-tany maharitra izay tsy ho hita. Nandritra io fotoana io dia nanova ny vatohara hoho, ny ahitra an-dranomasina, ary ny ala honko any amin'ny faritra voaaro ny harena an-kibon'ny tany - ireo sarintany ireo dia nampiasaina mba hanamorana ny fanaraha-maso sy ny fiarovana ireo toerana avo lenta ireo. Ny fanoloran-tenan'i Conservancy ho an'i Kiobà dia nahatonga antsika ho iray amin'ireo fikambanana vitsivitsy izay manana fifandraisana miasa mavitrika amin'ny masoivohon'ny fiarovana any Kiobà. Ny fiarovana ny tontolo iainana ao Kiobà dia manohana ny fanoloran-tena ataon'izy ireo sy ny fampiofanana ny governemanta sy ny mpiasan'ny ONG amin'ny fahaiza-manao ilaina hampandrosoana ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina sy teratany. Amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola avy amin'ny Tahiry Fikarohana momba ny fiarovana ny tontolo iainana eto Shina dia misy ny planina handrafetana ny rafitra fiarovana amin'ny tontolo iainana ho an'ny nosy amin'ny fampiasana teknolojia vaovao hanatsarana ny angon-drakitra efa misy ary hanatsarana izany amin'ny alalan'ny fahalalana ara-pahaizana. Ireo vokatra ireo dia ho tafiditra ao anatin'ny rafitra fampahalalam-baovao mba handinihana ireo sehatra fiarovana sy fampandrosoana-manome tari-dalana momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampandrosoana ny harena voajanahary sy ny fanalefahana.
Ny Dr. Luis Solórzano, tale mpanatanteraky ny Fandaharan'asan'ny Karibeana, Mr. Raimundo Espinoza, Mpitarika ny Fandaharan'asa ho an'ny Kiobà, ary Dr. Steve Schill, mpahay siansa ho an'ny Karibeana dia samy nandray anjara mavitrika avokoa mba hiatrehana ny fiaraha-miasa sy ny ezaka fiarovana any Kiobà. Nametraka fanontaniana vitsivitsy momba ny asa momba ny natiora ao amin'ny firenena izahay ary ireto no zavatra tokony holazain-dry zareo:
RR: Inona no hitanao amin'ny fanamby lehibe ho an'ny Kiobana miasa amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina?
Atoa Raimundo Espinoza: Tena mpankafy, mamorona ary manana fari-pahaizana ambony ny Kiobàna mpiaro ny tontolo iainana. Na izany aza, ireo olana amin'ny tontolon'ny teknolojia isan'andro, toy ny faharetan'ny Internet sy ny famerana ny rindrambaiko ilaina amin'ny fanadihadiana ara-tsiansa, dia fanamby atrehiny isan'andro. Manoloana ny haran-dranomasina kyana, ny vatoharan-dranon'ny Kiobana dia mihoatra ny iray ampahatelon'ny vatohara rehetra any Karaiba mampiseho fanamby amin'ny fanaraha-maso sy fitantanana ny faritra midadasika toy izany. Na eo aza anefa, i Kiobà dia manana rafitra faran'izay bitika indrindra any Karaiba. Ny tsy fahampian'ny firoboroboana amoron-dranomasina sy ny sakafom-pivarotan-tsakafo ary ny fitsirihana dia mitrandraka amin'ny vatohara Kiobàna dia manome ny fisainana hoe nahoana ireo rafitra ireo no afaka ny tsy hivadika raha oharina amin'ny rafitra hafa manimba ao Karaiba.
Mety hampidi-doza ny fampivoarana ny fampandrosoana dia mety ho sarotra amin'ny fitazonana ny rafitra vatohara Kiobàna ho salama. Miara-miasa amin'ireo masoivoho mpiaro ny zon'olombelona isika amin'izao fotoana izao mba hamantarana ny fomba tsara indrindra hanatanterahana ny fiarovana ny haran-dranomasina ary hiasa amin'ny fanamafisana ny tombontsoan'ny ranomasina amin'ny olona, ​​raha mihazona ny toeram-ponenana an-dranomasina tsara.
RR: Inona no atao hoe TNC mba hanampiana ireo olana ireo?
Atoa Raimundo Espinoza: Manana ezaka lehibe roa isika amin'izao fotoana izao. Ny voalohany dia ny "Blueprint Conservation Blueprint", izay horaisina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny masoivohom-piarovana Kiobana. Ny rafitra dia hitarika ny ezaka hampifantoka ny fiarovana amin'ny sehatra avo lenta, izay hanampy an'i Kiobà handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fampandrosoana amin'ny ho avy amin'ny fomba izay hampiroboroboan'ny fampiasana maharitra, fa tsy hamono ny fiarovana ara-tontolo iainana. Ankoatr'izay, ny Conservancy dia hanamora ny fanamafisana ny fitantanana ny haran-dranomasina sy ny famerenana amin'ny laoniny ao Kiobà amin'ny fametrahana ny faritry ny haran-dranomasina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Ivotoeram-pirenena Kiobana ho an'ny faritra voaaro ao amin'ny Elemento Natural Destacado- Sistema Espeleolacuste, faritra voaaro ao anatin'ny ecéologie ety amin'ny Ciénega de Zapata. Manolotra ny haran-dranomasina ho an'ny haran-dranomasina miaraka amin'ny siansa sy ny fomba tsara indrindra ary ny fitaovana ilaina hananganana sy hikarakarana ny lakandrano voalohan'ny kibay.
RR: Inona ny vokatra mety hitranga amin'ny Blueprint Conservation and Development Cuba?
Dr. Steve Schill: Ny Blueprint Conservation dia hanolotra tahirin-tsakafon'ny habakabaka an-tanandehibe, rano fisotro madio ary ny toeram-ponenana an-dranomasina sy ny hetsika ara-tsosialy manerana an'i Kiobà. Ireo endri-javatra ireo dia halefa araka ny tokony ho izy ny mari-pahaizana betsaka kokoa noho ireo daty teo aloha izay tsy mety, tsy marina, na sarintany amin'ny tsy fahampian-tsakafo. Amin'ny alalan'ity dingana ity, dia hamantatra ireo tsy fahampiana fiarovana izay hitondra mankany amin'ny famolavolana tambajotra azo antoka ny tambajotra azo antoka izay mahafeno ny tanjona voafaritra amin'ny fitantanana ny tontolo iainana eto an-tany sy ny siramamy ary ny an-dranomasina.
Ity tambajotra marobe miaro ny tontolo voaaro ity dia hanampy amin'ny fitazonana ny fiasa ara-tontolo iainana sy ny fampivoarana maharitra ireo rafitra manerana an'i Kiobà. Ankoatr'izany dia hanolotra atrikasa sy fivoriana maromaro izahay mba hampianarana, hanentanana ny saina ary hanangana fepetra iraisana ho an'ny fandaharam-potoana fanaraha-maso mahomby. Ity fandaharam-potoana ity dia hametraka laharam-pahamehana sy hitarika ny ezaka amin'ny fiarovana, hanampy ny governemanta handray fanapahan-kevitra mahaliana sy saro-takarina momba ny fampandrosoana amin'ny ho avy amin'ny fomba izay hampiroboroboana ny fampiasana maharitra, fa tsy fanaovana sorona ny tontolo iainana ara-tontolo iainana.
RR: Ahoana ny maha-zava-dehibe ny asan'ny Tetikasa momba ny natiora any Kiobà ho an'ny ezaka fiarovana any amin'ny faritra Karaiba?
Dr. Luis Solórzano: Kiobà no nosy lehibe indrindra any Karaiba ary iray amin'ireo nosy lehibe indrindra 20 maneran-tany ary noho izany dia iray amin'ireo soatoavina voaaro avo indrindra ao amin'ny faritra. Manana karazana karazana endemika ny nosy, manan-danja amin'ny fifindran'ny vorona avy any Amerika Avaratra, ary mihazona karazana zavamaniry marary ho an'ny faritra an-dranomasina. Ankoatra izany, i Cuba dia voatahiry tsara noho ny fiantraikany amin'ny fambolena sy ny fampandrosoana ary ny haavon'ny mponina.
Miaraka amin'ny fiovana any Etazonia - ny fifandraisana diplomatika Kiobà, ny fahafaha-mitombo ny hetsika ara-toekarena dia mety hampisy fiovana amin'ny fampiasana tany amin'ny sehatra toy ny fambolena, solika, fitrandrahana, fizahan-tany ary ny fifindra-monina. Ny Conservancy dia miasa mba hiarovana sy hitehirizana ireo harena voajanaharin'i Karaiba ary noho izany ny tanjona sy ny paikady fiarovana ny faritra dia tokony hampidirina ao Kiobà mba hiantohana ny fifandraisana biolojika sy ny fifandraisana biogeografika. Hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miasa Kiobanina izahay hamita ny drafitra fiarovana ho an'ny firenena, ary hanohana ny famolavolana sy ny fampiharana tambajotran'ireo faritra voaaro tsara. Ny tanjon'ireto ezaka ireto dia ny hisambotra ny harena biolojika an'ny tontolo iainana an-dranomasina sy an-tanety any Kiobà ary hiara-hiasa amin'ireo sehatra samihafa hahatratrarana tanjona kendrena amin'ny fampandrosoana, eo am-pitehirizana ny tsy fivadihana amin'ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary ao amin'ny firenena. Cuba dia mety ho tonga ohatra amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny taonjato faha-21, izay ilana ny filàna sy ny hetahetan'ny fampandrosoana ny olombelona nefa tsy manimba ny rafi-pamelomana aina mitazona antsika rehetra.